Ambanidia : nafindra ny biraom-pokontany | NewsMada
Ambanidia : nafindra ny biraom-pokontany
Tao aorian’ny nanakatonana azy, nitady vahaolana ny tompon’andraikitra ho an’ny biraom-pokontany eny Ambanidia. Fantatra ary izao fa nanomboka ny faran’ny herinandro teo, natambatra trano miaraka amin’ny biraom-pokontany Volosarika ny biraom-pokontany Ambanidia.
Tsy miray birao akory fa ny trano fotsiny no iraisana. Mitazona ny biraony hatrany ny fokontany Volosarika. Nomena efitra ao ambany rihana kosa ny fokontany Ambanidia. Nanambara ny sefom-pokontanin’Ambanidia, Rasolofomanana Isabelle, fa ahafahany miasa tsara ny birao.
Marihina fa nesorina tamin’ny toerana nisy azy teo aloha ny biraom-pokontany Ambanidia ny herinandro lasa teo. Tsy mazava ny taratasin’ny tany, misy tompony hono ny tany fa tsy an’ny kaominina ka teraka teo ny disadisa ary niafara hatramin’ny fanakatonana ny birao.
Ampinga iray tsy afa-misaraka amin’ny mponina ny biraom-pokontany. Eny avokoa no hanatontosana ny fikarakarana taratasy isan-karazany, hamahana ihany koa ny olana misy eo amin’ny fiarahamonina. Akaiky indrindra amin’ny mponina mialohan’ny biraon’ny firaisana sy ny kaominina ny fokontany.